जताततै कांग्रेस-माओवादीबीच कडा टक्कर, एमालेको पत्ता साफ ! • raradiodarpan.com
जताततै कांग्रेस-माओवादीबीच कडा टक्कर, एमालेको पत्ता साफ !
अमरगढी नगरपालिकामा भने काँग्रेसले एमालेको विरासत तोडेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यो नगरको मेयर र उपमेयर दुवै पद एमालले जितेको थियो । थोरै मतान्तरले भए पनि काँग्रेसले यो पटक एमालेले जितेको दुवै पद खोस्न सफल भएको छ ।
अहिले नगर प्रमुखमा काँग्रेसका डल्लीराज जोशीलाई काँग्रेस ९बीपी० का हरिप्रसाद भट्टले कडा टक्कर दिए । तर पनि जोशी झिनो मतान्तरले मेयर पद जोगाउन सफल भए । उनले ३६१९ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेस ९बीपी० का उम्मेदवार भट्टले ३४२६ मत पाए ।
यो नगरको उपमेयर पनि काँग्रेसले नै जितेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँगै भिडेको काँग्रेस यो पटक उपमेयर पद जोगाउन सफल भएको छ । उपमेयरकी उम्मेदवार काँग्रेसकी पार्वतीदेवी झुकाले ३६७८ मत पाउँदा एमालेका यज्ञराज अवस्थीले ३०८५ मत ल्याएका हुन् । उक्त नगरमा नेपाली काँग्रेस बीपी र एमालेले चुनावी तालमेल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा पर्ने अर्को परशुराम नगरपालिकामा काँग्रेस निकै कमजोर देखिएको छ । २०७४ सालमा नगरको मेयर र उपमेयर दुवै जितेको काँग्रेसलाई आफ्नो विरासत जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुलाई काँग्रेसका उम्मेदवारहरुले पछ्याइरहेका छन् ।
माओवादीका मेयर उम्मेदवार शेर सिंह मालले झिनो मतान्तरले काँग्रेसका भरत बडायर जोशीलाई पछि पारेका छन् । आज दिउँसोसम्मको अपडेटमा मालले चार हजार ३११ मत प्रप्त गर्दा बडायरले चार हजार ३१० मत पाएका थिए ।
तर, उपमेयरमा भने माओवादीकी विमलाकुमारी बोहराले फराकिलो अन्तर बनाएकी छन् । उनले ४३ हजार ६२ मत पाउँदा काँग्रेसकी कलापतीदेवी बोहराले ३३ सय ४२ मत पाएकी छन् ।
यसैगरि आलिताल गाउँपालिकामा पनि माओवादी नै बलियो देखिएको छ । यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै माओवादीले जितेको छ । अध्यक्षमा शेर सिंह पार्की २३८९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् ।
यो पालिकामा पनि काँग्रेसले दुवै पद गुमाएको छ । काँग्रेसका बलबहादुर गुरुङले २२२४ मतले अध्यक्ष पद गुमाएका हुन् । यस्तै, उपमेयरमा माओवादीकी मैनाकुमारी रावलले २६०२ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन् । काँग्रेसले निर्वतमान जनप्रतिनिधिहरुलाई नै अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उठाएको थियो ।
भागेश्वर गाउँपालिकामा भने काँग्रेस दोहोरिएको छ । यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष काँग्रेसले नै जितेको छ । अध्यक्षमा हेमराज चटौत र उपाध्यक्षमा पुष्पा ठकुराठी निर्वाचित भएकी हुन् । अन्य पालिकाभन्दा यसमा काँग्रेस बलियो देखिएको छ ।
नवदुर्गा गाउँपालिकामा काँग्रेसले एमालेको अध्यक्ष पद खोसेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका कवीन्द्रबहादुर विष्ट निर्वाचित भएका थिए । तर, अहिले काँग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले जितेका हुन् । उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै निर्मला कुमारी बोगटीले जितेकी छन् ।
अजयमेरु गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको राम्रो पकड भएको स्थानीय तह हो । अघिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा जितेको माओवादी यो पटक भने अध्यक्षमा मात्रै सीमित भएको हो ।
अध्यक्षमा माओवादीबाट उठेका उमेशप्रसाद भट्ट निर्वाचित भएका छन् । उनले २४ सय ६९ मत पाउँदा एमालेका पदमबहादुर पाल २२ सय ९७ मत पाए । तर, उपाध्यक्षमा काँग्रेसकी बसन्ती पालले २५ सय ६५ मत ल्याएर जितेकी छन् ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री देउवाको जन्म घर पनि हो । काँग्रेसको यो पालिकामा जिल्लाका अन्यपालिका भन्दा राम्रो पकड भएको मानिन्छ । तर देउवा नै गृह वडामा भने फेल खाएका छन् । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर बनेको काँग्रेस ९बीपी० का उम्मेदवार वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
वडास्तरमा केही कमजोर देखिए पनि यो गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष काँग्रेसले नै जितेको छ । अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्की र उपाध्यक्ष ज्ञानुकुमारी सेटीले जितेका हुन् ।